Isbahaysiga oo sheegey iney hakiyey hawlgal argagixiso oo ay sameeyeen kooxda Xuutiyiinta ee Badda Cas – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Isbahaysiga oo sheegey iney hakiyey hawlgal argagixiso oo ay sameeyeen kooxda Xuutiyiinta...
Isbahaysiga oo sheegey iney hakiyey hawlgal argagixiso oo ay sameeyeen kooxda Xuutiyiinta ee Badda Cas
Afhayeenka ciidamada isbahaysiga, Isbahaysiga Taakuleynta Sharciga ee Yemen, Kornayl Turki Al-Maliki ayaa sheegay in ciidamada isbahaysiga badda ay subixii subaxnimadii Axadda isku dayeen isku day ay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ku doonayaan inay ku qaadaan cadaawad iyo ficil argagixiso koonfurta Badda Cas.
Al-Maliki wuxuu caddeeyey in ficilkan argagixisannimo loo adeegsan doono doon meel fog fog laga maamulo oo ay maleegayaan maleeshiyaadka argagixisada ah ee ka socda Maamulka Hodeidah.
Afayeen u hadlay ciidamada isbahaysiga ayaa xusey in doontii ay la qariqsatay, taas oo khatar ku ahayd amniga gobolka iyo kan caalamiga ahba ay wax yeeleeyeen oo ay burbureen, sidoo kale gaadiidka badda iyo ganacsiga caalamiga ah.
Al-Maliki wuxuu intaas ku daray in 3 miinooyinka badda ah sidoo kale la helay oo la burburiyey (24) saacadood ee la soo dhaafay marinka Bab al-Mandab iyo koonfurta Badda Cas, taasoo keentay tirada miinooyinka badda ee la soo helay oo burburay illaa iyo hadda (150) miinooyinka badda ee ay maleeshiyaadka taabacsan Iran taageerayaan ay dejiyeen.
Kornayl al-Maliki wuxuu caddeeyey in malleeshiyada Xuuthiyiinta ay ka qaadayaan Hodeidah Governorate meel ay ku soo saaraan gantaalada balliska iyo drones-ka, doomaha ay ku xaniban yihiin, iyo doomaha meelaha fog laga hago, iyo sidoo kale miinooyinka aan caadiga ahayn ee badda.
Wuxuu carabka ku adkeeyay in tani ay si cad oo cad u tahay sharciga caalamiga ee xuquuqda aadanaha iyo ku xadgudubka qodobbada heshiiskii (Stockholm) iyo heshiiskii xabbad-joojinta ee Hodeidah.
Al-Maliki wuxuu carabka ku adkeeyay in hogaaminta isbaheysiga ciidamada isbahaysiga ay sii wadayaan hirgalinta tilaabooyin adag oo looga soo horjeedo maleeshiyaadka argagixisada iyo in la takooro ama baabi’iyaan awoodahan oo khatar ku ah amniga gobolka iyo kan caalamiga ah.
Beegsonews.com waa warbaahin madax baanaan oo ku soo baxda dalka, kaga bogo wararka Somaalida iyo aduunkaba Goorwalba iyo marwalba. oo aan kusoo qaadano wararka,caafimaadka,. NOOGU SOO GUDBI WIXII WARBIXIN AH, emailka: beegso[email protected] iyo facebook iyo twitter beegsonews. Wa bilaahi Tawafiiq
Shirkad Shiine ah Oo Somaliland Ka Caawinaysa Horumarinta Beeraha